Indawo ephangaleleyo kunye neYokuphumla kwikhosi yeGalufa
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSeamus
Eli khaya likwinqanaba eliphezulu elinemigangatho emithathu lilungele ukuphumla, ukonwaba kunye njengendawo yokuphehlelelwa kuyo yonke imisebenzi yale ndawo.
Qhuba phakathi kwemizuzu engama-45 ukuya ekulobeni kunye nokukhwela isikhephe e-Georgetown Lake, ukutyibilika kwindawo yokutyibilika eDiscovery Ski, kunye nemizuzu eli-15 ukuya eFairmont Hot Springs Resort. Abalandeli beGalufa- le yindawo yakho! Ikhaya lethu libuyela kumngxunya obonisiweyo kwikhosi ye-Anaconda Country Club edumileyo, kwaye yimizuzu nje eli-15 ukusuka kwiJack Nicklaus eyilwe iNdala yeGolf course kunye neFairmont Golf Course.
Ikhaya lethu limi kwiihektare ezimbini zoxolo kwindawo yasemaphandleni yeThuba, kuphela iikhilomitha ezi-6 ukusuka kwidolophu ethandekayo ye-Anaconda.
Le ndawo izaliswe ngezinto eziluncedo ezongezelelekileyo zosapho okanye iqela lokubaleka!
UMGANGATHO OMNTU yintliziyo yekhaya, enegumbi elikhulu elinyukayo elinegumbi lelanga elincanyathiselwe, ikhitshi elinyulwe ngokupheleleyo elinegumbi lokutyela, i-king master suite ene-steam shower/ibhafu, amanye amagumbi okulala amabini, elinye igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye negumbi lokuhlamba impahla elinesinki esetyenziswayo. .
-I-UPSTAIRS LOFT ibandakanya iibhedi ezimbini ezingamawele, i-chaise epholileyo elungele ukonwabela incwadi entle okanye ukulala, kunye ne-cushy recliners yokuphumla kunye nokujonga ibala legalufa kunye nomlambo.
-Ngokolonwabo lwakho, i-BASEMENT EPHELELEYO ibonelela ngendawo yethiyetha yasekhaya etofotofo, ibha eyenziwe ngokwesiko, igumbi lokudlala, izixhobo zokuzilolonga kunye nebhafu epheleleyo enesauna eyomileyo!
-Phumela NGAPHANDLE kwaye uthobe iisayithi kunye nelanga ngedesika enkulu enemigangatho emi-2 egcwele i-BBQ, indawo yokuhlala kuzo zonke iindwendwe zakho, kunye nebhentshi eshukumayo kwezo ngokuhlwa zishushu zasehlotyeni. Okanye uqokelele emlilweni kwintendelezo yethu ephefumlelwe yiSpanish enendawo yomlilo yeenkuni.
-Ungalibali ixesha lokudlala! Hlala ekhaya kwimidlalo yangaphandle kwindawo enkulu enengca efana ne-badminton, ibhola ekhatywayo, ibhola yevoli, izihlangu zamahashe, nokunye! Okanye uphume uhambo lokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, i-kayaking, ukutyibilika ekhephini okanye i-4-wheeling.
-Ipropathi ingaphaya kwesitrato ngokuthe ngqo ukusuka kwipaki yoluntu ethandekayo enendlela yokuhamba, ibala lokudlala kunye nepavilion yomsitho. Sibuze iinkcukacha ukuba uceba umtshato, ukuhlangana kwakhona, itheko lokuzalwa lomnye umcimbi!
-Isixeko sase-Butte sikwimizuzu engama-20 ukuya kwiindawo zokutyela ezongezelelweyo, iinkonzo kunye nokuthenga, kunye nokhenketho lwezemigodi lwembali.
Hamba uye kule ndawo ithuleyo yokuhlala yasemaphandleni enokufikelela ngokulula unyaka wonke ukuya kwi-Interstate 90 kunye nedolophu yaseAnaconda. Ipropathi enkulu yabelana ngocingo kunye nebala legalufa elinemingxuma eli-9 kwaye lingaphaya kwesitrato ukusuka kwipaki yoluntu enendawo yokudlala, indawo yokudlala kunye nendlela yokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Seamus
I-Cohost yethu, i-Kerie, iya kuba ngoyena uphambili ekunxibelelaneni kwakho malunga nogcino lwakho, izinto eziluncedo zalapha ekhaya, kunye nemibuzo yepropathi. Okanye uzive ukhululekile ukundithumelela umyalezo okanye unditsalele umnxeba kwiseli yam ukuba unemibuzo ethile malunga nekhaya okanye njenge-backup yazo naziphi na iimfuno zikaxakeka.
I-Cohost yethu, i-Kerie, iya kuba ngoyena uphambili ekunxibelelaneni kwakho malunga nogcino lwakho, izinto eziluncedo zalapha ekhaya, kunye nemibuzo yepropathi. Okanye uzive ukhulu…